Забур 7 CARS - Nnwom 7 ASCB
Dawid adesrɛ dwom a Benyaminni Kus nsɛm enti ɔto maa Awurade.
1Ao, Awurade me Onyankopɔn,
medwane metoa wo;
Gye me firi wɔn a wɔtaa me nyinaa nsam,
2anyɛ saa a wɔbɛtete me mu sɛ gyata
na wɔatete me mu asinasini a
3Ao, Awurade me Onyankopɔn, sɛ mayɛ yei
na sɛ afɔdie aba me so a,
4sɛ mayɛ bɔne atia deɛ ɔne me te yie
anaasɛ mabɔ me ɔtamfoɔ korɔno kwa a,
5ɛnneɛ ma mʼatamfoɔ ntaa me na wɔmmɛto me;
ma wɔntiatia me so wɔ fam
na wɔmma me funu nna mfuturo mu.
6Sɔre wʼabufuo mu, Ao Awurade!
Sɔre tia mʼatamfoɔ abufuo.
Nyane, me Onyankopɔn; hyɛ atɛntenee mmara.
7Ma nnipadɔm mmɛtwa wo ho nhyia.
Firi soro hɔ di wɔn so;
Bu me atɛn, Ao Awurade sɛdeɛ me teneneeyɛ teɛ,
sɛdeɛ me nokorɛdie teɛ, Ao Ɔsorosoroni.
9Ao Onyankopɔn teneneeni,
wo a wohwehwɛ adwene ne akoma mu,
fa amumuyɛfoɔ basabasayɛ bra awieeɛ
na ma ateneneefoɔ nya banbɔ.
10Mʼakokyɛm ne Ɔsorosoro Onyankopɔn
deɛ ɔgye akoma mu teneneeni no.
11Onyankopɔn yɛ ɔtemmufoɔ teneneeni,
Onyame a ɔda nʼabufuo adi da biara.
ɔbɛse nʼakofena ano;
ɔbɛkuntunu ne tadua na ɔde bɛmma ahyɛ mu.
13Wasiesie ne kɔdiawuo akodeɛ;
ayɛ ne bɛmma a ɛrederɛ no krado.
14Deɛ ɔnyinsɛn amumuyɛ
15Deɛ ɔtu tokuro na ɔyi mu dɔteɛ no
hwe tokuro a watu no mu.
16Ɔhaw a ɔde ba no dane bɔ nʼankasa so;
ne basabasayɛ bɔ nʼankasa tiri so.
17Mede aseda bɛma Awurade
ne tenenee enti
na mato ayɛyi dwom ayi Awurade, Ɔsorosoroni no din ayɛ.
ASCB : Nnwom 7